South Africa oo sheegtay in laba muwaadin looga afduubtay Soomaaliya. - BBC Somali
South Africa oo sheegtay in laba muwaadin looga afduubtay Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee dalka Koonfur Africa, ayaa sheegtay in laba ka mid ah muwaadiniintooda lagu haysto gudaha dalka Soomaaliya kadib markii la afduubtay doon yar oo kuwa raaxada ah oo ay leeyihiin, kuwaas oo ay qabsadeen burcad badeeda Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay wasaaradda addimaha dibedda, ayaa sheegay in laba ka mid ah dadka doonta la qabsaday saarnaa ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay dalka Koonfur Africa.
Wuxuu intaas ku daray in loo malaynayo in burcad badeed soomaali ah ay ka qafaasheen doonta ay saarnaayeen xilli ay maraysay badwaynta India.
Burno Pekezari iyo haweenayda ay wada noolaayeen Deborah, ayaa ku sii jeeday Richards Bay ee waqooyiga bari ee xeebta Kwazulu Natal sida uu sheegay Barry tunrer, oo u hadlay daaidga Bluff ee doomaha lagu dalxiiska tago oo xarun ku leh magaalad Durban, oo qoysku ay xubno ka ahaayeen, wuxuu la hadlay wakaaladda wararka ee Sapa.
Waxay halka uga baxeen iyagoo aan cinwaan rasmi ah ku socon, waxay tageen Madagascar oo ay joogeen ilaa 18 bilood, kadib waxay u gudbeen Dar e Salaam Tanzania, ayuu yiri. Barry Turner.
Wuxuu intaas ku daray in markii ugu dambaysay ay ahayd iyagoo ka tagay magaalada Richards bay oo u jihaystay dhinaca bariga.
Wasaaradda arrimaha dibedda, ayaa sheegtay in qofka sadexaad oo u dhashay dalkooda oo ay soo badbaadiyeen ciidamada la dagaalanka burcad badeedda ee Europe, la geeyay safaaradda Koonfur Africa ay ku leedahay magaalada Nairobi.
Ciidamada Europe ee la dagaalanka burcadbadeedda ayaa sheegay in laba ka mid ah dadkii saarnaa doonta yar bariga ay burcad badeedu ula dageen.
Wadihii doonta ayaa ka dhaga adaygay in uu ka dego doonta kadib markii burcad badeedu isku dayeen in ay xoog ku xagaystaan.